မြန်မာ့ပထမဆုံးပိုးတွေ့လူနာ၂ဦးနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့တဲ့ တီးတိန်ကရွာနဲ့ အရှင်ဆေကိန္ဒကျောင်းတိုက်ကို Lock down ချ
24 มี.ค. 2563 - 13:51 น.
ဗြိတိန်နိုင်ငံက ပြန်လာသူမှာ လေဆိပ်ကနေ စောင့်ကြည့်ရာနေရာကို တန်းရောက်သွားသူဖြစ်ပေမယ့် အမေရိကန်နိုင်ငံကလာသူအမျိုးသားမှာ တီးတိန်မြို့အပြင် ကလေးမြို့ကိုလည်း Pre wedding အတွက် ဓာတ်ပုံသွားရောက်ရိုက်ကူးတာတွေကိုပါရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒါကြောင့်အဆိုပါ အမျိုးသားသွားခဲ့တဲ့နေရာတွေထဲက ရွာကြီးကို Lock Down (သို့မဟုတ်) Community Quarantine လုပ်ခဲ့တဲ့အပြင် ကလေး-တီးတိန် အဝင်အထွက်ကန့်သတ် နေပြီလို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဖြစ်သူ ဦးဇော်ဌေးက တရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။
နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းအဝင် တံတားကြီးတွေမှာ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးကာ ထူးခြားမှု တွေ့ပါက စောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုတာ (Quarantine )လုပ်ပါမယ်။ ပြည်တော်ပြန်တွေကို Home Quarantine ၁၄ ရက် ထားပါမယ်လို့လည်း ဦးဇော်ဌေးက သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကတဆင့် ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
မတ် ၂၃ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ပထမဆုံး ပိုးတွေ့လူနာတွေလို့ဆိုရမယ့် အဆိုပါအမျိုးသား ၂ဦးဟာ ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသွားပြီလို့လည်း မတ် ၂၄ ရက်မနက်ပိုင်းမှာ ကောလာဟလတွေ ပျံ့နှံ့ခဲပါတယ်။
' ' ၂ယောက်စလုံး ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်။ ကောလာဟလတွေတင်တဲ့အကောင့်တွေကိုဖြုတ်ချဖို့ Facebook Team နဲ့ဆောင်ရွက်တာတွေလုပ်နေတယ်။ ပေ့ချ်တွေကတင်တာဆိုရင်လည်း မီဒီယာကောင်စီကတဆင့် တိုင်ကြားတာတို့လုပ်ပါတယ်။ အရေးယူတာ တရားစွဲတဲ့အပိုင်းကတော့ ကျန်တဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေက လုပ်ရမှာပါ။''လို့ ကိုဗစ် -၁၉ လူနာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကောလာဟလ တွေအပေါ် ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးက အခုလိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။
อัลบั้มภาพ မြန်မာ့ပထမဆုံးပိုးတွေ့လူနာ၂ဦးနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့တဲ့ တီးတိန်ကရွာနဲ့ အရှင်ဆေကိန္ဒကျောင်းတိုက်ကို Lock down ချ